Ahoana ny fomba fanaovana sy fahatakarana ny motera Stirling - Ikkaro
Amin'ity fizarana ity dia handinika ny motera mampihetsi-po, famaritana, karazana motera mampihetsi-po ary ohatra amin'ny fananganana sy ny fampiharana.
Vao avy namorona faritra ao anaty motera izahay ho an'ny motera mampihetsi-po. Mametraka fampahalalana amin'ny bilaogy izahay, toy ny lisitry ny rohy sy loharanom-pahalalana miaraka amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba an'io karazana motores, ka heveriko fa mety ny manazava ny antony hitako fa mahaliana azy ireo ...
El motera ny mikomy, izay nipoitra ho fanandramana hafa milina etona. Mila loharano hafanana fotsiny izy io mba hiasa ary tena tsara ny vokatra azo. Raha teorika dia izy irery no afaka mahazo ny fampisehoana Carnot sy amin'ny fampiharana ary amin'ny hafainganam-pandeha ambany, hoy izy ireo fa akaiky izany. Ny fampisehoana Carnot no avo indrindra azo atao amin'ny motera hafanana.
Ny Sehatra Solar an'ny Almería Manangana fitaovana lehibe hanovana ny fivezivezan'ny motera ho lasa angovo elektrika izy, mifantoka amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro amin'ny teboka iray hahazoana ilay jiro mafana amin'ny motera.
Ho anao izay efa mieritreritra momba anaoloharanom-pahavitrihana vaovao milaza aminao fa na dia misy a fampisehoana mahafinaritra su fahefana manokana kely izy io, tsy toy ny ao anaty motera fandoroana anatiny hafa ampiasaina amin'ny fiara.
Fa ny tena nahaliana ahy indrindra dia ny mahita maodely kely tsy miasa afa-tsy amin'ny hafanana ateraky ny vatan'olombelona. Na kafe iray kapoaka.
Avelako ho anao ny horonan-tsary vitsivitsy avy amin'ny youtube ary jereo raha afaka miasa isika hananganana iray amin'ireo ankizy kely.
Ny fanangonana rohy mahaliana momba ny motera mampihetsi-po.
Maotera Sirling ao amin'ny Wikipedia. Wikipedia fidirana natokana ho an'ny Motera mitroka, ho an'ny tsiriko somary kamo. Azo antoka fa misy olona afaka manatsara azy betsaka.
Distal sy Eurodish. Tetikasa lehibe hivadika angovo azo avy amin'ny masoandro ho angovo azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny motera mampihetsi-po.
Tetikasa farany asa. Miankina amin'ny motera mampihetsi-po. Vaovao sy loharanom-pahalalana mahaliana no hita.
Teknolojia efa lany andro. Fanazavana tena kanto momba ny motera mampihetsi-po
Stirling Engine. Fanangonana rohy lehibe amin'ny teny anglisy.
Stirling EngineLinks. Fanangonana rohy ilaina amin'ny teny anglisy iray hafa, mampalahelo fa tsy feno amin'ny teny Espaniôla ireo fampahalalana rehetra ireo.
Raha fantatrao ny loharanom-baovao bebe kokoa, aza misalasala mamela hevitra fa hanampy ny rohy izahay.
Motera mihetsika Stepper
Tsikelikely ary ny lahatsoratra isaky ny lahatsoratra dia manitatra ny zoronay kely momba izany izahay motera mampihetsi-po.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nahita lahatsoratra iray misy ny fananganana antsipirihany ny motera Stirling LTD amin'ny makezinina (tapaka ny rohy) soa aman-tsara no tazominay ny atiny. Ity motera ity dia LTD, izay midika fa natao hiasa amin'ny fahasamihafana kely amin'ny maripana.
Manana torolàlana feno momba ny motera Stirling izahay, raha te-hiditra amin'ity tontolo mampientanentana ity ianao dia tena mahaliana fa mianatra kely momba ny tantarany ihany koa ianao, maninona no miasa izy ireo, inona ny bisikiletany, ireo karazana misy sns.
Fanamboarana motera mihetsika.
Izy io dia masinina izay mila ahalalanao tsara ny fanamboarana azy. Tsy dia sarotra loatra ny mamerina azy io, fa raha mitandrina isika dia hahazo fandidiana tsiranoka bebe kokoa.
Araka ny hitanao amin'ny sary dia môtô karazana izy io
Ahoana ny fananganana motera Stirling
Rehefa avy nanomboka bilaogy momba ny milina mikorisa, ny mpiara-miasa amintsika, Jorge Rebolledo Nandefa antsika ny fomba fijery nipoaka momba ny fananganana milina izay natsangany tamina horonantsary hita tao amin'ny YouTube.
Satria lehibe loatra izy io, dia hizarantsika amin'ny telo lahatsoratra ny fananganana ny masinina.
Ity no mandeha voalohany.
Masinina mihetsika ny Jorge Rebolledo